Makambani akasiyana siyana nemasangano anotsigira Google mukutonga zvinopesana neOracle | Linux Vakapindwa muropa
Kune akati wandei makore ave achizivikanwa izvo Oracle neGoogle zvakave nekukonana kwakawanda, kusanganisira chinonyanyo kuzivikanwa ndechirevo kubva kuOrcale kuenda kuGoogle nezve kushandisa Java API pane Android mune iyo Oracle yanga ichirwira ruregerero pakushandiswa kweJava pane Android.
Rangarira kuti, Muna 2012, mutongi ane ruzivo rwehurongwa akabvumirana nechinzvimbo cheGoogle uye yakabvuma kuti muti wemazita-anogadzira API chikamu chechimiro chemirairo. Mutemo wekodzero unodudzira kuti seti yemirairo yakadaro haina kuiswa mumutemo wekopiraiti, nekuti kudzokororwa kwechimiro chemirairo chinhu chakakosha mamiriro ekuvimbisa kuenderana uye kutakurika.
Naizvozvo, kuzivikanwa kwemitsara nezviziviso uye nzira yemusoro wetsananguro hazvina basa nekuitwa kweanoshanda mashandiro, mazita eAPI ekudzidzira mabasa anofanirwa kuenderana, kunyangwe kana iko kuita kwacho kuchiitwa nenzira dzakasiyana.
Sezvo paine nzira imwe chete yekuratidza zano kana basa, munhu wese akasununguka kushandisa zvakafanana zvirevo, uye hapana anogona kutonga mazwi akadaro.
Oracle akakwidza nyaya uye akadzosera mutongo muFederal Court of Appeal kubva kuUS, uko dare redzimhosva rakatonga kuti Java API inzvimbo yehungwaru hwaOracle.
Pashure paizvozvo Google yakashandura tack uye yakaedza kuratidza izvozvo iko kuiswa kwe API kwe Java papuratifomu yeApple yakajeka muchimiro uye kuyedza uku kwakabudirira.
Chinzvimbo cheGoogle ndechekuti kuvaka software inotakurika hakudi rezinesi reAPI uye kudzokorora iyo API kugadzira vanoshanda vanoshanda ndiko "kushandiswa kwakanaka."
Sekureva kweGoogle, kuiswa kweAPI sechinhu chehungwaru kuchakanganisa indasitiri, Sezvo ichikanganisa kuvandudzwa kwehunyanzvi, uye kugadzirwa kweanowirirana anoshanda emanyorerwo epuratifomu mapuratifomu anogona kuve iwo musoro wematare.
Oracle akamhan'ara kechipiri uye nyaya yacho yakaongororwa zvakare mukuda kwayo. Dare rakatonga kuti mutemo we "kushandiswa kwakaringana" haushande kuApple, nekuti Google inogadzira iyi chikuva ine zvinangwa zvinoitika kwete kuburikidza nekutengesa chaiko kweiyo software chigadzirwa, asi kuburikidza nekutonga kwemasevhisi uye kushambadzira zvine hukama.
Panguva imwecheteyo, Google inochengetedza kutonga pamusoro pevashandisi kuburikidza neayo yeAPI yekudyidzana kuti iwirirane nemasevhisi ayo, ayo anorambidzwa kushandisa kugadzira mamwe anoshanda, izvo. Kushandiswa kweJava API hakugumiri kune isiri-yekutengesa kushandiswa.
Iwo makambani akapa dare nemhedziso nehunyanzvi hwavo hwekutarisa yemaitiro, kushandisa kodzero yekutora chikamu mukutongwa kubva kune wechitatu bato isina hukama neumwe wemapato, asi achifarira kuti dare riite sarudzo yakakodzera.
Padivi IBM, iyo kambani anotenda kuti kugovera yakavhurika komputa masekisheni kukopimendi kunogona kukuvadza mabhizinesi uye inononoka hunyanzvi uye makambani ehukuru hwese anokwanisa kushandisa akavhura APIs mune avo dhizaini.
Microsoft inotenda kuti kushandiswa kweJava API kuGoogle kuri muchimiro chekushandisa kwakanakaNepo Mozilla ichinongedzera kuti mitemo yekopiraiti haifanire kushanda kumaAPI uye vanogadzira vanofanirwa kukwanisa kushandisa APIs vasingatyi kuve nechokwadi chekubatika kwezvimwe zvigadzirwa nemhinduro.
Dare Repamusorosoro rinotarisirwa kutora mutongo waro muna Chikumi. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Makambani akasiyana siyana nemasangano anotsigira Google mukutonga zvinopesana neOracle